Wondershare Ule Onye kere - A onye na-enyere Eme Izi na Ọmụmụ
> Resource> Atụmatụ> Mee a Quiz na Ule Generator welie Izi na Ọmụmụ
E ị bụ, na-eke ule ajụjụ na akwụkwọ, na-eche na o siri ike banyere ule ọdịnaya, na-agbalị ka gị ajụjụ dị ka na-akpali dị ka omume. N'ezie, ọ na-adịghị ga-abụ otú ahụ. The omenala ụzọ nke na-ewere udomo oro-agbanwe agbanwe. Ị pụrụ ime ka a zaa ajụjụ na ule generator-enyere gị aka na-arụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè, na-azọpụta a ọtụtụ oge na formats.
QuizCreator - A inyeaka maka nkụzi na ụmụ akwụkwọ
QuizCreator Bụ ike ule generator ngwá ọrụ, ọ na-enyere ị na-atụgharị na-ede n'akwụkwọ n'ime online ajụjụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Onye Ozizi, ị ga-ahụ nke a ule onye ịtụnanya, n'ihi na ọ pụrụ ikwado gị na ozizi gị. I kwesịghị eme ka ọtụtụ mgbalị ọkwa ikpo akwụkwọ. Quiz Onye Okike ga-eme ntule n'ihi na ị na-akpaghị aka. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-amụrụ ihe, ị nwere ike mfe tụọ gị ọmụmụ online na free online ajụjụ onye, ​​mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla na ị bụ. Nke ahụ bụ n'ezie kediegwu.
Were Wondershare QuizCreator ka ihe atụ, ị nwere ike ịlele a ajụjụ sample mere site ule a na-ewu soro ụmụ akwụkwọ 'ọmụmụ maka ndị nkuzi.
Key Akụkụ nke QuizCreator Mee a Ule mfe.
1. Wuru na-ụdị dabeere edezi mode.
Na-ewu na na ụdị dabeere edezi mode, Wondershare online ule generator-enyere gị aka ime ka a zaa ajụjụ ọsọ ọsọ na mfe dị ka ejuputa a ụdị. Ọ na-enye 9 ajụjụ ụdị, gụnyere Multiple Nhọrọ, jupụta na ide na usoro. Ị nwere ike dị họrọ gị mma ajụjụ ụdị, na ibà ajụjụ na azịza n'ịwa gị onwe gị ajụjụ.
Ị nwere ike ịhọrọ gị mma template, setịpụrụ Njirimara na itinye ya n'ọrụ gị ajụjụ. n'ụzọ dị otú a, ị n'ezie ga na-enwe na okokụre online ajụjụ.
Mma Izi Ogo na Free Ule Generator
Ị nwere ike itinye image, ụda na nkiri na ajụjụ mee ka gị na ule ajụjụ na-ekere òkè n'elu menu. Maka ụmụ akwụkwọ, ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụ na-eme ka multimedia ukwuu n'echiche na-adọta ụmụ akwụkwọ 'anya. Ụmụ akwụkwọ ahụ pụrụ ịnụ ụtọ nke ịmụta kama na-eli onwe-ha akwụkwọ. Mgbe maka ndị nkuzi, ọ bụ oké ụzọ ka mma ozizi mma.
I nwekwara ike hazie font, size, ndabere, wdg gị ajụjụ. E wezụga na, mgbe ha na ajụjụ, ị nwere ike ịtọ nzaghachi site ajụjụ, ma ọ bụ site azịza. N'ileghachi anya na gị chọrọ ajụjụ, ị ga-a mmetụta nke mmezu.
Ebe ọ bụ na a ule generator eweta gị nke ukwuu uru, ị ga-apụghị inye aka n'ịwa gị onwe gị ule ajụjụ!
Free Download Wondershare QuizCreator & Enwe ya Great Power!